Yaa U Hanjabay Taageera Yaasha Musharax Farmaajo Ee Muqdisho? | Isha Caasimada Soomaaliya
Xog ay si hoose u heshay ishacaasimada.com ayaa waxay sheegeysaa in madaxda sare ee DFS gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh uu hanjabaad ujeediyey taageerayaasha Farmaajo, isaga oo soo marsiiyey saraakiil ciidan.
Taageerayaasha Farmaajo oo ay ugu horreeyaan ragga abaabulka soo dhoweyntiisa ka wada magaalada Muqdisho ayaa loo sheegay in xabsi la geyn doono haddii ay magaalada dad badan isku soo bixiyaan, sidoo kale dadka isku soo baxana bud lala dhici doono.
Axmed Cali waa shaqsi ka tirsan qabanqaabiyeyaasha soo dhoweynta Farmaajo, magacan ma ahan kiisa saxda ah, balse sababo ammaan ayuu u qariyey, waxa uu wakaaladda Warqaad u sheegay in ay shaqsi ahaantiisa ay lasoo hadleen saraakiil sar sare oo DFS ah, una sheegeen inaan loo duqaldaan doonin waxa ay Muqdisho ka wadaan.
Wuxuu tilmaamay iney weydiiyeen in ay wax xun wadaan iyo in kale, balse kaliya waxaa uu tilmaamay in looga gaabsaday in marnaba aaney isku dayin soo dhoweynta Farmaajo, waliba si xad dhaaf ah haaney usoo dhoweyn.
“Waa la isoo wacay, waxaa la i dhahay macquul ma noqon doonto in Farmaajo usoo dhoweysaan sida nin madaxweyne ah, waxaa kaloo la i yiri haddii aad falkaasi isku daydaan xabsi baad muteysan doontaan, waxaad wadaanna waa qalqal aan dalka gelineysaan iyo shacabka oo aad been u sheegeysaan, mana u dulqaadan doonno” sidaasi waxaa yiri Axmed Cali.
Axmed sidoo kale wuxuu tilmaamay in iyagu aaney arrintan dheg jalaq u siin doonin, islamarkaana ay howshooda u gudan doonaan sidii loogu talo galay, ayna ka baaqan doonin soo dhoweynta Farmaajo.
“Kolley annaga go’aankeenna waa inaan sii wadanno soo dhoweynta Farmaajo, aan aragno cidda xabsi na dhigta ama na disha, waxaan u sheegayaa in dhammaan taageerayaasha Farmaajo ay magaalada isugu soo baxaan oo aaney ka cabsan DFS iyo sidoo kale cid walbo oo dooneysa in dalka caburin geliso”
Farmaajo ayaa dhowaan kusoo wajahan magaalada Muqdisho, wuxuuna kamid yahay musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha sanadkaan 2016-ka.